“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल जेठ ३ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – Mix Khabar
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल जेठ ३ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,सम्वत २०७६ साल जेठ ३ गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३९ वछलाथ्व,सन् २०१९ मे १७ तारिक शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि विहान ५ वजेर ३९ मिनेटसम्म,स्वाती नक्षत्र राती ३ वजेर २० मिनेटसम्म,व्यतिपातयोग,तैतिलकरण,आनन्दादियोग गद,सूर्य वृष राशीमा,चन्द्रमा तुला राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३३ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२७ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ६÷५७ बजेबाट ८÷३८ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–विहान १०÷१९ वजेबाट मध्यान्ह १२ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह ३÷२३ वजेबाट ५÷४ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–विहान ७÷५७ वजेबाट ८÷५१ वजेसम्म र मध्यान्ह १२÷२७ वजेबाट अपरान्ह १÷२१ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ६÷५७ वजेसम्म चर वेला,६÷५७ वजेबाट ८÷३८ वजेसम्म लाभ वेला,८÷३८ वजेबाट १०÷१९ वजेसम्म अमृत वेला,१०÷१९ वजेबाट १२ वजेसम्म काल वेला,१२ वजेबाट १÷४२ वजेसम्म शुभ वेला,१÷४२ वजेबाट ३÷२३ वजेसम्म रोग वेला,३÷२३ वजेबाट ५÷४ वजेसम्म उद्वेग वेला र ५÷४ वजेबाट सूर्यास्तसम्म चर वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ८÷४ वजेसम्म रोग वेला,८÷४ वजेबाट ९÷२३ वजेसम्म काल वेला,९÷२३ वजेबाट १०÷४२ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷४२ वजेबाट १२÷१ वजेसम्म उद्वेग वेला,१२÷१ वजेबाट १÷१९ वजेसम्म शुभ वेला,१÷१९ वजेबाट २÷३८ वजेसम्म अमृत वेला,२÷३८ वजेबाट ३÷५७ वजेसम्म चर र ३÷५७ वजेबाट सूर्योदयसम्म रोग वेला रहनेछ ।शुभाशुभ
मेषः– परिवारजनको सहयोगमा काम बन्ने छन् । देश,प्रदेश यात्राको योग बनिरहेको छ । लगानीमा विचार पु¥याउनु होला । व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगतिको राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।
वृषः– कामलाई हल्का रुपमा नलिनु होला । प्रयत्नपूर्व गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आफन्तबाट पराईको व्यवहार हुन सक्छ सतर्क रहनु होला ।
मिथुनः– घर परिवारबाट सहयोग त्यति पाईने छैन । काम गर्दा कत्ति पनि दुविधामा नपरि गर्नु होला । कामको चिन्ताले छोड्ने छैन । समयलाई बुझेर काम गर्न सकेमा सफलताको नजिक पुगिनेछ ।
कर्कटः– आलस्यता बढ्नेछ । काम गरेर जश कमै मिल्नेछ । पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । विवादबाट टाढा बस्नु होला । उपलब्धिका काम रोकिने छन् ।
सिंहः– काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । आफ्नै बाहुबलमा अधिकाँश काम सम्पादन हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । आफुले गरेका कामले अरुलाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ । पढाईमा सुधार आउनेछ ।
कन्याः– विचार गरेर काम गर्नु होला अवस्यमेव सफल हुनु हुनेछ । आयमुलक काम भन्दा व्ययमुलक काम बढि हुनेछन् । आर्थिक कारोवारमा बढि सतर्क रहनु होला । व्यापारबाट सामान्य लाभ हुनेछ ।
तुलाः– उत्तम आसन र भोजन प्राप्तिको योग देखिन्छ । गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
वृश्चिकः– अनावस्यक काममा धन लगानी हुन सक्छ ।कहि कतैबाट आरोप लाग्न सक्छ सतर्क भई काम गर्नु होला । समयले पनि कम साथ दिने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ ।
धनुः– व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । लेनदेन कारोवारमा सुधार आउनेछ । कुनै पनि काममा हेलचक्रयाई नगर्नु होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सोचे जस्तै नभए पनि निरासा भने हुनु पर्ने छैन ।
मकरः– जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम बन्ने छन् । वैदेशिक कार्यबाट लाभान्वित हुनु हुनेछ । व्यापारमा सुधारका संकेत देखिने छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसर आउन सक्छ ।
कुम्भः– काम गरेर जश भन्दा अपयश बढि मिल्नेछ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । घर छोडेर हिड्न मन लाग्नेछ । आम्दानी खर्च बरावरै जस्तो होला । ऋणको चिन्तले छोड्ने छैन । व्यापार घट्नेछ ।
मिनः– समयले कम साथ दिनेछ । खानपानमा ध्यान दिनु होला नत्र स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । लेनदेन कारोवारमा विवाद पर्न सक्छ । शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । व्यापार घट्नेछ । मानसिक चिन्ता बढ्नेछ ।“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
Posted on: Thursday, May 16, 2019 Time: 20:19:47
आगलागी हुँदा तीन घर र दुई गोठ जलेर पूर्णरुपमा नष्ट
नवलपरासीमा हावाहुरीले बितण्डा मच्चायो, २ मिनेटको हुरीले २ सय घरका छाना उडे
गरे के हुन्न र नेपालमा ? हेर्नुहोस काँक्रो बेचेर दिनको २०/२५ हजार कमाउछन् पोखराका केबल